ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်နှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ်ရရှိသူများအား တံဆိပ်ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်နှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ်ရရှိသူများအား တံဆိပ်ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား
လွှတ်တော်သတင်းများ Jun 18 /0Comments
၁၈. ၆. ၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ထားဝယ်
ယနေ့၊ နေ့လည်(၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ်ရရှိသူများအား တံဆိပ်ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးနှင့် ရုံးအဖွဲ့များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အခမ်းအနားတွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့မှ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအား လိုအပ်သည်များ မှာကြားဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများမှ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်ရရှိသူ(၂)ဦး၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ် ရရှိသူ (၈)ဦးတို့အား အသီးသီးဆုတံဆိပ်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားအား (၁၄၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
Total Visitors: 207615